I-PRISM: Isakhelo sokuPhucula ukuGuqula amajelo eendaba | Martech Zone
NgoLwesithathu, Novemba 2, 2016 Lwesine, Matshi 4, 2021 UIan Cleary
Inyani yile yokuba awuthengisi kumajelo eendaba ezentlalo kodwa unokuvelisa ukuthengisa kwimithombo yeendaba ukuba uphumeza inkqubo epheleleyo yokuphela.
Inkqubo-sikhokelo yethu ye-PRISM 5 yinkqubo ongayisebenzisa ukuphucula uguquko kwimidiya yoluntu.
Kule nqaku siza kucacisa Isikhokelo samanyathelo ama-5 kwaye uhambe ngezixhobo zomzekelo onokuzisebenzisa kwinyathelo ngalinye lenkqubo.
Ukwakha i-PRISM yakho kufuneka ube nenkqubo enkulu, umxholo kunye nezixhobo ezifanelekileyo. Kwinyathelo ngalinye lePRISM kukho izixhobo ezahlukeneyo ezifanelekileyo.
Ukuze uphumelele kwimidiya yoluntu kufuneka ube nabaphulaphuli. Kuya kufuneka wakhe abaphulaphuli ngokungaguqukiyo kodwa kuya kufuneka uhlalutye abaphulaphuli bakho ukuze uqiniseke ukuba abaphulaphuli kufanelekile. Akukho ndawo yokuba nesigidi se-1 sabalandeli ukuba asifanelekanga.
Isixhobo somzekelo osisebenzisayo Affinio ebonelela ngoqhekeko oluneenkcukacha kubalandeli bakho be-Twitter. Ungasisebenzisa isixhobo sasimahla ukuba unabalandeli abangaphantsi kwe-10,000. Kwiplatifomu nganye kuya kufuneka uhlalutye abaphulaphuli bakho rhoqo ukuze uqiniseke ukuba kufanelekile.
Ukwenza abaphulaphuli bakho banike ingqalelo kuwe, kufuneka wakhe ubudlelwane kunye nabaphulaphuli bakho. Wakha ubudlelwane kwisikali usebenzisa umxholo okanye wakhe ubudlelwane kwi-1 ukuya kwi-1 isiseko kunye nefuthe eliphambili.
Ukwakha ubudlelwane kufuneka usebenzise isixhobo solawulo lweendaba ezinje I-Agorapulse. I-Agorapulse iya kuchonga abantu kumjelo wakho abangabaphembeleli okanye abantu abazibandakanya rhoqo nawe. Awunakho ukwakha ubudlelwane kunye naye wonke umntu kwisiseko esi-1 kuye kwesoku-1 ke kuya kufuneka ubeke iliso kubaphembeleli okanye ababandakanyekayo.
Amajelo eendaba ezentlalo ayenzeli ukuthengisa ngenxa yoko kuya kufuneka uphumeze amaqhinga athile okuqhuba ukugcwala kwimithombo yeendaba kwiwebhusayithi yakho. Ungaqhuba ukugcwala kwezinye iindlela, umzekelo, usebenzisa ibhlog.
Esinye isixhobo esikhulu sokukunceda uchonge amagama aphambili ukwenza umxholo ngeenxa zonke Semrush. Umzekelo, unokubeka igama labakhuphiswano bakho kwaye ufumane eyona ndlela iphambili yokudibanisa ukuqhuba ukugcwala kwindawo yabo. Unokwenza umxholo ngokujikeleze la magama aphambili okanye okufanayo.
I-S yabaBhalisi kunye nokuBuyiselwa kweNtlalo kwakhona
Uninzi lweendwendwe zakho zentlalo azizukuthenga kutyelelo lokuqala ngenxa yoko kuya kufuneka uzame ukufaka iinkcukacha zazo usebenzisa i-imeyile. Optinmonster sesinye sezixhobo ezifanelekileyo zokubamba i-imeyile.
Ukuba iindwendwe aziboneleli ngedilesi ye-imeyile ungaqhubeka phinda ujonge ezi ndwendwe ngeentengiso kuFacebook okanye amanye amaqonga.
M yokwenza imali
Kuya kufuneka wakhe iijeli zentengiso eziguqula iindwendwe zakho okanye ababhalisele i-imeyile kwintengiso. Elinye lawona macandelo abaluleke kakhulu ekwenzeni imali kukuseta umlinganiso kuwo onke amanqanaba efaneli yakho. Ukuguquka kwebhabhathane sisixhobo esihle sokwenza oku.
Imidiya yokuncokola ilungile ngokwakha abaphulaphuli kunye nokwazisa ngawe, inkampani yakho, iimveliso kunye neenkonzo zakho.
Kodwa…. kukwalungile ukuvelisa ukuthengisa ukuba uphumeza isiphelo esipheleleyo senkqubo. Kuya kufuneka uqonde onke amanqanaba enkqubo yokuthengisa kwezentlalo kunye nokuphumeza amaqhinga athile kwaye usebenzise izixhobo ezithile kwinqanaba ngalinye.
Ngaba ungasisebenzisa esi sikhokelo kwintengiso yemidiya yoluntu?
tags: amajelo asekuhlaleni ahambele phambiliifanele yokuguqulaurhwebo inboundUkuhamba kweendlelaukwenza imaliPRISMisakhelo semidiya yoluntuUkwenza imali kwimidiya yoluntuubudlelwane kwimidiya yoluntuukuphinda ujonge ekuhlaleniUkubuyisela umrhumo kubhalisi kwakhona
U-Ian yi-CEO ye RazorSocial kwaye unikezele ngobomi bakhe bokusebenza ekuncedeni ukuba ufumane ezona zixhobo zibalaseleyo kunye netekhnoloji yeendaba zosasazo. U-Ian uthetha rhoqo kwimisitho (ikakhulu e-US), kwaye ubhalela uninzi lweebhloko zeendaba zentlalo.
Izibonelelo zeVidiyo yokuKhangela, iNtlalo, i-imeyile, iNkxaso… nangaphezulu!